Candy Crush Soda Saga - Egwuregwu swiiti anwụrụ - Free Ndụ Ndụ Atụmatụ Ndị na-egosi
Ị nọ ebe a: Ulo / Uncategorized / Candy Crush Soda Saga
Last updated on Julaị 20, 2021 Site na Isobella Franks Leave a Comment
N'akụkọ ihe mere eme nile, enweela ọtụtụ usoro ndị bịara wee daa n'iyi n'oge oge. Otú ọ dị, e nwere ole na ole ndị nwere àgwà ndị dị otú ahụ nke na ha dịruru karịa oge ha tụrụ anya ya. N'otu aka ahụ, Candy Crush bụ otu n'ime usoro ndị ahụ a tụrụ anya na ọ ga-apụ ngwa ngwa ka ọ bịara mana ihe bụ Swiiti Crush mere ihe dị iche iche na egwuregwu ha.. Pụrụ iche, ọ bụghị naanị na ha welitere ihe ịma aka ọhụrụ na ọkwa ha kamakwa wetara ụdị egwuregwu ọhụrụ kpamkpam dịka nke Candy Crush Soda Saga.
Candy Crush Soda Saga bụ otu n'ime nsụgharị kachasị ewu ewu, n'ihi ntuli aka ịntanetị, na usoro nke Candy Crush saga. Egwuregwu ahụ yiri ka ọ na-agbaso otu usoro ahụ ọzọ dị ka usoro ya mana ọ na-eme ka ọ dịkwuo elu site n'ịgbakwunye mgbagwoju nke Sodas na candies ọnụ..
Ebumnobi nke egwuregwu ahụ na-agbanwe ka anyị na-aga n'ihu na mpaghara dị iche iche na ọkwa egwuregwu.
Ụfọdụ ihe nkiri ama ama nke Swiiti zọpịa Soda larịị gụnyere:
Soda larịị: nke a bụ ụdị ọkwa kachasị ebe ị jikọọ 3 ma ọ bụ karịa ụdị Sodas iji weta Soda n'elu.
Ọkwa oyi: ị kpọghee ọkwa a na ọkwa 6. N'ọkwa a, Ọ bụghị nanị na ị ga-ejikọta candies ọnụ kamakwa ị ga-agbaji ice blocks iji weta Soda n'elu.
Ọkwa afụ: Na ọkwa a, ọ bụghị naanị na ị ga-ebute anụ ọhịa bea na eriri, n'elu, mana ị ga-abawanye ọkwa nke Soda na bọọdụ.
Ihe omume ọhụrụ
Chocolate larịị: dị ka ọ pụtara ìhè site n'aha ya na chọkọletị larịị nwere ịrụ ụka adịghị ya na chocolate na ya. Ị ga-akwụsị ịgbasa chọkọleti na-eto ngwa ngwa.
Ọkwa mmanụ aṅụ: n'ọkwa a, mkpa ka ị nọgidesie ike, mgbe ị na-ewepụ anụ ọhịa bea si n'okpuru mmanụ aṅụ blocks na nke a n'uche na n'ígwé nke mmanụ aṅụ na blocks nwere ike mkpa ruo ikpochapụ nke. 6 n'ígwé.
Candies pụrụ iche
Ụfọdụ candies pụrụ iche nwere ike inyere gị aka ikpochapụ Swiiti anwụrụ soda saga ka mfe. Ekwuru ndị a n'okpuru
Swiiti gbawara agbawa bụ nke mbụ. Tinyere inye isi ọ na-enyere gị aka ikpochapụ ahịrị dum. Nke abuo, e nwere swiit kechie. Site n'itinye swiiti a, ị na-ewepụ candies ndị ọzọ; karịsịa, 8 candies nke dị gburugburu swiit afụchiri. Nke atọ, enwere swiiti azụ na mgbe ị jikọtara square abụọ na abụọ ị nweta swiiti azụ. N'ihi nke a azụ ndị a na-eri otu ụdị swiiti gburugburu osisi
Ihe ndị a abụghị ihe niile. E nwekwara candies ndị ọzọ. Ha na-enyere gị aka ikpochapụ ọkwa nke swiiti crush soda saga.
Ihe isi ike nke ọkwa ọ bụla na Candy Crush Soda Saga dị iche. Otú ọ dị, ka ị na-enwe nsogbu nwere ike ịbawanye. Kpam kpam, ịkwesịrị ịdị njikere ihu ihe ịma aka dị iche na ọkwa ọ bụla.